ई-रातो खबर २०७८, ११ पुस आइतबार १७:०१ December 26, 2021 1638 Views
शदियौँदेखि अशिक्षा, भोकमरी, रोग र गरिबीको चपेटामा लपेटिएको, जापानी र अमेरिकी साम्राज्यवादको औपनिवेशिक सिकञ्जामा जकडिएको विशाल भूभाग र जनसङ्ख्या भएको चीनलाई दीर्घकालीन जनयुद्धका माध्यमद्वारा मुक्त गराई नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादसम्म पुर्याउने महान् नेता माओले प्रतिपादन गरेको मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले सार्वभौमिक चरित्र ग्रहण गरिसकेको छ । वर्तमान विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओ र माओका योगदानलाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा कुनै पार्टी वा समूह क्रान्तिकारी हो कि संशोधनवादी भनी किटान जाँच्ने कसी पनि बनिरहेको छ । माओजस्तै विश्व साम्यवादी सिद्धान्तलाई विकास र समृद्ध गर्ने महान् नेताको जीवनव्यवहारसँग जोडेर कैयौँ किंवदन्ती पनि नबनेका होइनन् । के कुराचाहिँ सत्य हो भने एउटा महान् नेता हुन अद्वितीय क्षमता हुन जरुरी हुन्छ । साथै उसले आफ्नो जीवनलाई त्याग, बलिदान र समर्पणको उत्कर्ष बनाउन पनि जरुरी छ । क्षमता, त्याग, समर्पण र बलिदानको उत्कर्षको जगमा मात्र सच्चा सर्वहारावर्गको स्पातिलो नेताको जन्म हुन सक्छ भन्ने कुरा माओको जीवनीबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
माओका माओ एनिङ र माओ एङ्किङ नामका दुई छोरा थिए । पश्चिमको स्याङ्सीमा रहँदा माओको नाम लि देसेङ थियो । त्यसैक्रममा माओका दुई छोरी जन्मिए– लि ने र लि मिन । माओले वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका क्रममा छजना आफन्त गुमाउनुभएको थियो । उहाँकी जीवनसाथी आङ्काई हुई र छोरा माओ एनिङ युद्धका क्रममा सहिद भएका थिए ।
माओका जेठा छोरा माओ एनिङ सोभियत सङ्घबाट स्नातकोत्तर गरेर चीन फर्किए । माओ ग्रामीण किसानहरूसँग कुराकानी गरिराख्नुभएको थियो । एनिङले माओलाई आफूले विश्वविद्यालय शिक्षा सकेर आएको जानकारी दिए । माओले छोरालाई पुराना टालेका लुगा दिँदै भन्नुभयो, ‘तिमीले त्यो विश्वविद्यालयको शिक्षा त सक्यौ । अब यी लुगा लगाएर जनताको विश्वविद्यालयमा पढ्न जाऊ ।’ माओले छोरा एनिङलाई कोरियाको साम्राज्यवादविरुद्धको युद्धमा पठाउनुभएको थियो । त्यहाँ साम्राज्यवादी बमको प्रहारबाट माओ एनिङको मृत्यु भएको थियो । टेलिग्राफमार्फत छोराको मृत्युको खबर चीनमा आइपुग्यो । माओले छोराको सहादतको खबर पाउनुभयो । उहाँ असाध्यै चिन्तित हुनुभयो तर आँसु झार्नुभएन । कोठामा यताउता हिँडी मात्र राख्नुभयो । चुरोट तानिराख्नुभयो । खाना खान सक्नुभएन । ‘यो मेरो छोरा हुनु नै उसका लागि दुर्भाग्य थियो’ यति मात्र भन्नुभयो । माओले एनिङकी जीवनसाथी अर्थात् बुहारी फुलाई बोलाउन पठाउनुभयो र सम्झाउँदै भन्नुभयो, ‘तिमी आजदेखि मेरी जेठी छोरी भयौ । मेरी छोरीलाई जे गर्ने स्वतन्त्रता छ, तिमीलाई पनि त्यो स्वतन्त्रता छ । तिमीले गर्व गर्नुपर्छ तिम्रो जीवनसाथी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहिद भयो । साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँमा मृत्युवरण गर्यो ।’
माओलाई आफ्नै पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यहरूले दिने गरेको रिपोर्टमा विश्वास थिएन । उहाँ आफ्ना अङ्गरक्षकहरूलाई घर पठाउने गर्नुहुन्थ्यो । घर गएका अङ्गरक्षकहरूले रिपोर्ट लिएर आउँथे । जनताले के भनेका छन् ? के खाएका छन् ? उनीहरूको जीवनस्तर कस्तो छ ? भन्नेबारेमा रिपोर्ट ल्याउन लगाउनुहुन्थ्यो । सन् १९६० मा चीनमा खाद्यान्न उत्पादनमा सङ्कट पर्यो । भयानक भोकमरीले चीनलाई एकपटक लपेट्यो । माओका अङ्गरक्षक लि यिङ्किआओले गाउँका किसानहरूले खाने गरेको सुक्खा रोटी माओका लागि ल्याइदिए । त्यसलाई भाँचेर माओले मुखमा हाल्नुभयो । त्यो रोटी अति नै साह्रो थियो । उहाँले चपाउन सक्नुभएन । उहाँका आँखाबाट आँसु झरिराख्यो । माओले तुरुन्तै पोलिटब्युरोको बैठक आह्वान गर्नुभयो । उक्त बैठकमा सबै सदस्यलाई त्यो रोटीका एकएकवटा टुक्रा खान दिनुभयो । साह्रो भएकाले कसैले पनि चपाउन सकेनन् । त्यसबखत माओले आफैँले २८ वर्षसम्म युद्ध लडेर ल्याएको राज्यव्यवस्थामा जनताको दयनीय अवस्थाको चित्रण गर्दै विरोध गर्नुभयो । जनताले खान पाएका छैनन् भन्ने थाहा पाएपछि माओले सात महिनासम्म मासु खाँदै खानुभएन । हुनत माओलाई सुँगुरको उमालेको मासु खुबै मन पथ्¥यो । यसले गर्दा उहाँका हातगोडा एकदमै कमजोर भएका थिए । अन्ततः उहाँले विद्रोह गर्नु अधिकारको नारा दिएर बमबार्ड एट द बुर्जुवाज हेडक्वार्टरको निर्देशन दिँदै महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्घोष गर्नुभयो ।
एउटा किसानको छोरा, लोग्ने, बाबु अनि सहयोद्धाहरूको कमरेडका रूपमा रहेका माओ विश्वमा राजनेताका रूपमा कहलाइएका माओको जीवन, व्यवहार र सिद्धान्तका बीचमा समुचित तालमेल मिलेको थियो । जस्तो किसिमको पनि जोखिम मोल्नसक्ने, प्रकृतिविरुद्ध जुध्ने, फरक धारमा हिँड्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्ने, त्याग, बलिदान र समर्पणमा रमाउने र सिद्धान्त र व्यवहारका बीचमा खाडल हुन नदिने, अध्ययनलाई शीर्ष स्थानमा राख्ने नेता मात्र साम्यवादी आन्दोलनको वास्तविक नेता हुनसक्छ भन्ने कुरा माओको जीवनीबाट सिक्न सकिन्छ । स्वयम् माक्र्स र लेनिनको जीवन पनि कम थिएन । जो यी विशेषताहरूसहितको गुणले युक्त छ, उसले मात्र सुरुदेखि अन्त्यसम्म साम्यवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकेको छ । देश र जनतालाई मुक्त गर्न सकेको छ । रूपमा जति नै क्रान्तिकारिता देखाए पनि बमको आवाजले तर्सिने, आफूमाथि क्रान्ति मडारिन थाल्यो भने अब क्रान्ति सम्भव छैन भन्दै छेरभालु हुने र आत्मसमर्पणसम्म गर्न पुग्ने ढोङ्गी नेता त बन्न सक्छन् तर कालान्तरमा उनीहरूको असली नियत उदाङ्गो हुन पुग्छ । ती इतिहासका पानामा पनि सीमित हुन योग्य हुँदैनन् । रोल्पामा बस्दा खारामा पड्किएको बमको आवाजले कायल भएका नेताहरूले वर्गघात त गर्न पुगेपुगे, राष्ट्रघात र जनघात गर्नाको परिणाम यही हो ।
१२ पुस, २०७५